कस्तो रहला तपाईको बिहिबारको भाग्य? असार १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् - Onlinenews Global
June 30, 2021 laxmiLeaveaComment on कस्तो रहला तपाईको बिहिबारको भाग्य? असार १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मीन – आत्मविश्वासको कमीले काममा पछि परिनेछ । शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । खर्च हुने डरले स ता उ न सक्छ । वादविवादबाट टाढा रहनुहोला । अर्थ अभावले पनि काममा बा धा पुग्नेछ । आफ्ना सूचनासम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला । ई र्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर काम लिनुहोला, आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
August 10, 2021 laxmi